गर्भवतीले यी कुराहरु याद नगर्दा रोगी बच्चा जन्मिन सक्छ, ख्यालख्याल गर्न हुन्न - यादका टुक्रा
कुन अवस्थामा सावधानी अपनाउने ? : आमाको हरेक गतिविधि, सोंच चिन्तन, खानपानले गर्भको बच्चालाई सोझो असर पार्छ । त्यसैले यतिबेला स्वस्थ्य एवं पोषिलो खानपान, सन्तुलित जीवनशैली र सकारात्मक सोंच आवश्यक हुन्छ । कतिपय कुरामा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ । जस्तो कि, लामो यात्राको क्रममा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ । गर्भावस्थामा धेरै एक्स रे गराउँदा त्यसको सोझो असर गर्भको बच्चामा पर्छ । जथाभावी औषधी सेवनले पनि समस्या निम्त्याउँछ ।
किटनासक र भ्रुण : अहिले हामी आयतित खाद्यपदार्थमा निर्भर छौ । चाहे त्यो चामल, दाल, तेल वा फलफूल, तरकारी नै । र, अहिले व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्ने यी खाद्यपदार्थमा कहि न कतै किटनासक औषधी प्रयोग गरिएको हुन्छ । यहि किटनासक औषधीको प्रभावले गर्भको बच्चामा सोझो असर पर्ने र अपाङ्ग एवं अशक्त बच्चा पैदा हुने भय रहन्छ । केहि अध्ययनबाट के थााहा भएको छ भने, गर्भावस्थाको बेला प्रयोग गरिने खानेकुरामा किटनासक औषधी प्रयोग भएको छ भने त्यसको असरले बच्चामा जन्मजात विकार देखिन सक्छ । जुन महिलाले अत्याधिक किटनासकको प्रभाव झेल्नुपर्छ, उनीहरुमा ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म यस्तो खतरा रहन्छ ।
के गर्ने ? : संभव भएसम्म जैविक खाद्य पदार्थ नै सेवन गर्नु राम्रो हो । आफैले उत्पादन गरेको खानेकुरा भए त चिन्ता लिनुपर्ने कारण नै रहँदैन । तर, कतिपय अवस्थामा यो संभव हुँदैन । त्यसैले आफुले सेवन गर्ने खानेकुरा बजारबाट ल्याइसकेपछि नुन र पानीको घोलमा डुबाउने, खासगरी तरकारी र फलफूल । आधा घण्टा भिजाएपछि मात्र त्यसलाई सफा पानीले धोएर सेवन गर्नुपर्छ ।
Don't Miss it यी ६ कुराहरु नसिकाउने हो भने असल अभिभावक होइन,
Up Next बच्चालाई भान्छाको काममा लगाउदा चकित पर्ने गरिका फाइदा छन्
इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न यति सम्म गर्छन् गर्लफ्रेन्डले, पढौँ है केटाहरु हो
प्रेम गर्ने कुरालाई हामीकहाँ त्यती फराकिलो आँखाले हेरिदैन । प्रेम गर्नुलाई ‘असामाजिक’ काम ठानिन्छ, खासगरी केटा र केटीबीच हुने प्रेमलाई…
यस्ता प्रेमी/प्रेमिकालाई जीवनसाथी बनाइहाल्नु नत्र चुकचुकाउनु पर्ला
युवा उमेरमा प्रेम गरिन्छ । प्रेम गर्नुको अर्थ बैंशालु सुखभोग गर्नु मात्र हो ? धेरैसँग यसको स्पष्ट जवाफ नहुन सक्छ…